मधेशी मोर्चाका पार्टीको झण्डा वा कालो झण्डा फहराए मोटरसाइकल चलाउन पाउने ! - News Today
मधेशी मोर्चाका पार्टीको झण्डा वा कालो झण्डा फहराए मोटरसाइकल चलाउन पाउने !
हिन्दुहरुको पर्व विजयादशमी सकिएलगत्तै आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले नाकाबन्दीसहितको पूर्ववत् आन्दोलनलाई अत्यन्तै सशक्त बनाएको छ ।
मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले मधेशका जिल्लाहरुमा मोटरसाइकल र रिक्सा समेत चल्न दिएका छैनन् भने वीरगञ्ज र विराटनगरसहितका नाकामा झनै कडाइ गरेका छन् । मोर्चाले मोटरसाइकल र रिक्सा चलाउनै परे मधेशी मोर्चाका कुनै घटक दलको झण्डा वा कालो झण्डा फहराउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।
पर्साको वीरगञ्जमा बसेको मोर्चाका जिल्लास्तरीय नेताहरुको बैठकले मोटरसाइकल र रिक्सासमेत चल्न नदिने तर चलउनैपर्ने भए पार्टीको झण्डा वा कालो झण्डा लगाएर चलाउन आग्रह गरेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका पर्सा जिल्ला अध्यक्ष प्रदीप यादवले बताए । त्यस बैठकले रिक्सा र मोटरसाइकलमा आगजनी तथा तोडफोड नगर्न आफ्नै आन्दोलनकारीलाई आग्रह गरेको छ ।
पछिल्ला दुई दिन आन्दोलनलाई अत्यन्तै कडा बनाउँदै मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले रिक्सा र मोटरसाइकल समेत चल्न दिएका थिएनन् । ती सवारी साधन चलाउन खोज्ने सर्वसाधारणलाई नियन्त्रणमा लिएर आन्दोलनकारीले दजनौं मोटरसाइकल, रिक्सा र ब्याट्रीबाट चल्ने सिटीरिक्सामा समेत तोडफोड गरेका थिए ।
साइकल, मोटरसाइकल र रिक्साबाहेकका अन्य सवारी साधनमा भने आन्दोलनकारीले कुनै छुट नदिने आन्दोलनको क्रममा जनकपुरमा खटिएका तमलोपा उपाध्यक्ष बृखेशचन्द्र लालले बताए । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने ढल्केबरमा कात्तिक ७ गते बसेको मधेशी मोर्चा धनुषा शाखाको बैठकले एम्बुलेन्समा बिरामीबाहेक कसैलाई ओहोरदोहोर गर्न निर्णय गरेको थियो ।
आन्दोलनलाई अझ सशक्त र कडा बनाउने निर्णय गर्दै मोर्चाको धनुषा जिल्ला समितिले मोटरसाइकल चलाउनैपरे आन्दोलनरत पार्टीको झण्डा वा कालो झण्डा फहराएर चलाउन पाउने निर्णयसमेत गरेको थियो । विराटनगर र जोगबनी नाकामा खटिएका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य जयराम यादवले आइतबारदेखि विराटनगरमा सिटी रिक्सासमेत चल्न नदिएको जानकारी दिए ।
आफूहरुले विराटनगर–जोगबनी नाकामा समेत आइतबारदेखि कडाइ गरेको यादवले बताए । ‘रक्सौल नाकाजस्तो जोगबनी नाकामा दसगजा क्षेत्र छैन । दसगजा क्षेत्रमा घर, पसल र बसोवास छ । त्यसले हामीले हाम्रो नेपाली भूमिमा धर्ना बस्दा हामीलाई नेपाली सुरक्षाकर्मीहरुले बल प्रयोग गरेर लखेट्छन् ।,’ उल्लेख गर्दै यादवले स्थानीय व्यापारी र तस्करहरुसँग स्थानीय सुरक्षाधिकारीहरुको मिलेमत्तोका कारण नाकामा सोचेजस्तो कडाइ गर्न नसकेको स्वीकार गरे । उनले दशैंपछि विराटनगरको आन्द्योलनका साथै जोगबनी नाकामा पनि अत्यन्तै कडाइ गर्ने जानकारी दिए ।
तेलको कालोबजारीमा रोक
यस्तै, मधेशी मोर्चाले पेट्रोलियम पदार्थको कलोबजारीमा समेत कडाइ गरेको छ । हाल गहृजिल्ला सप्तरीको राजविराजमा सक्रिय रहेका सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले दशैपछि पेट्रोल तथा डिजेलको कालोबजारीमा रोक लगाउन कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिइएको बताए ।
महासचिव सुमनले सीमापारि गएर मोटरसाइकलमा इन्धन भर्ने र यता गिलेनमा जम्मा गरेर महँगोमा बेच्ने गरेको धन्धा फस्टाएको स्वीकार गरे । आन्दोलनको क्रममा तस्करहरुका लागि कालोबजारी फस्टाएको निष्कर्ष निकाल्दै मोर्चाका जिल्ला शाखाहरुले कालोबजारीमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको सुमनको भनाइ छ । तमलोपाका लालका अनुसार दैनिक प्रत्येक जिल्लाबाट कम्ति ५० हजार लिटर पेट्रोलियम पदार्थ कलोबजारी भएरु कठमाडौं र पहाडका जिल्ला जाने गरेको तथ्याङ्क सुनाए ।
कालोबजारी बढेर काठमाडौं र पहाडका जिल्लामा इन्धन आपूर्ति जारी रहेकोले आन्दोलनलाई असर गरेको लालको दाबी छ । उनले सीमापारिबाट इन्धन तस्करी गरेर महँगो मुल्यमा बेच्ने काममा कांग्रेस र एमालेका जिल्ला कार्यकर्ताहरु अग्रस्थानमा रहेको लालले आरोपसमेत लगाए । इसमता डटकम्बाट
Previous : चार सय लिटर पेट्रोल र डिजेल बरामद
Next : चीर हरण